Meteza hamorona teny lakile ho an'ny doka | Martech Zone
Alahady, Septambra 23, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Rehefa mamaky Tranokalan'i John Chow, Hadinoko fa nisoratra anarana amin'ny AuctionAds aho fa tsy nametraka ilay kaody mihitsy tamin'ny tranokalako. Anio hariva dia nampidiriko ny kaody tamin'ireo hafatra nataoko tokana teo anelanelan'ny atin'ny lahatsoratra sy ny sehatra fanehoan-kevitra. Manantena ny hahita ny fampisehoana an-dry zareo aho.
AuctionAds dia manana fiasa mahafinaritra izay ahafahanao mamaritra manokana ireo teny lakile tianao hananana doka. Raha tokony hizaha ireo mahazatra ho an'ny tranokalako iray manontolo dia napetrako ny Plugin Ultimate Tag Warrior hampiasa (indray)!
Ny AuctionAds dia mitaky ny famolavolana ny teny fanalahidy ho an'ny doka miaraka amin'ny kôlôlôna ho toy ny delimiter. Vokatr'izany dia mila manaingo endrika manokana ny fivoahan'ny kaody Ultimate War Warrior ianao. Namolavola ny ahy aho mba hanao lisitra ny marika voalohany ary avy eo nametraka semi-colona sy habaka teo anelanelan'ny ambiny. Ho fanampin'izay, notondroiko farafahakeliny ny teny lakile 3 farafahakeliny mba haseho ary narahiko tamina teny fanalahidy 3 default izay fantatro fa hampiseho doka foana.
Ny fikendrena ny doka amin'ny atiny dia tokony hiteraka fiakarana amin'ny taha-tsindry amin'ny doka. Vao haingana aho no nanandrana ny Google Adsense vs. Google Referrals tao amin'ny iray amin'ireo tranokala nokendrena ahy ary ny Adsense dia 8 heny noho ny taha-tsindrio Ny fifandraisana amin'ny doka no zava-drehetra! Raha tsy manome dokam-barotra mifandraika amin'izany ianao dia hampahatezitra ny mpamaky anao fotsiny na hitombo ny tsy firaharahiany ireo doka. Tsy misy maniry izany!
Naoty iray: Rehefa tena mizaha ilay kaody ianao dia mety tsy hitondra valiny amin'ny voalohany. Ireo olona ao amin'ny Auction Ads dia milaza fa maharitra fotoana fohy ny fananganana ireo valin'ny teny lakile ireo. Tsy azoko antoka hoe mandra-pahoviana. Azonao atao ihany ny mahazo ny vola miditra amin'ny interface Auction Ads, na izany aza!
Tags: doka varotra
Hey Mike! Momba ny makiazy ihany koa ny marketing